Hub ‘laga boobay’ xaruntii tabobarka Imaaraatka ee Muqdisho - BBC News Somali
Hub ‘laga boobay’ xaruntii tabobarka Imaaraatka ee Muqdisho
Illaa 600 qori ayaa lagu soo waramayaa in laga boobay xaruntii tabobarka ciidammada ee ay Imaaraatka maamulayeen ee magaalada Muqdisho maalmo uun kadib markii tabobarayaashii Imaaraatka ay ka baxeen dalka, sidoo kalena la laalay heshiiskii labada dowladood ka dhaxeeyay.
Warkan oo ay si gaar ah u faafisay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa uu intaas ku darayaa in hubka lagu kala iibsanayo suuqaqa Muqdisho si qiimo jaban ah.
Halkii qori oo ah nooca Kalashnikov-ka ayaa la kala siisanayaa illaa $700 doolar, halka qiimihiisa caadiga ah uu yahay $1300 doolar.
Waxaa qoryahay ku xardhan astaanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, balse hubka waxaa dalka keenay Imaaraatka sida ay sheegeen illo wareedyo u waramay wakaaladda.
Falanqeyn: Iscasilaadii Taliyaha Ciidanka Soomaaliya